बेलायतमा पक्राउ परेका कर्णेलबारे परराष्ट्रमा छलफल :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
बेलायतमा पक्राउ परेका कर्णेलबारे परराष्ट्रमा छलफल २० पुस, काठमाठडौं । बिहीबार बेयालतमा पक्राउ परेका नेपाली सनेाका कर्णेल कुमार लामाका सम्बन्धमा काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयलमा छलफल शुरु भएको छ । नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी नदिई नेपाली सैन्य अधिकारीलाई त्यसरी पक्राउ गरिएकोमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आक्रोश प्रकट गर्नुभएको छ ।
परारराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे नेपालस्थित बेलायती दूतावासलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारीसमेत गरेको स्रोत बताउँछ । लामाको गिरफ्तारीबारे अपरान्ह परारष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ ।
सुडान मिसनमा कार्यरत कर्णेल लामालाई श्रीमती भेट्न गएका बेला लण्डनको प्रतिआतंकवादविरोधी मेट्रो प्रहरीले मानवअधिकार उल्लंघनको अपराधमा पक्राउ गरेको हो । पक्राउ बारे नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी गराइएको थिएन ।
कर्णेल लामाको गिरफ्तारीसम्बन्धी यो समाचार पनि हेर्नोस् ।
5 Comments on “बेलायतमा पक्राउ परेका कर्णेलबारे परराष्ट्रमा छलफल”
b.d wrote on4January, 2013, 6:44
bideshi haru ko nepal mathiko ko dabab bhanne bujhaeko chha
Rajiv Neupane wrote on4January, 2013, 6:59
Aparadh garne lai jaha gaye pani chhoot hudaina bhanne dekhiyo…maobadi netaharu hosiyar………
Fdr Nepal wrote on4January, 2013, 13:49
ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन भएको देशमा बल्ल बेलायतले ठीक गरेछ / टाऊकेहरुले बल्ल थाहा पाउने भयो अब मान्छेले हाकेको देश र कानुनले हाकेको देश /
विनय यादव wrote on4January, 2013, 16:57
युरोपेली र अमेरीकी मुलुकहरुले नेपाल भित्र गन्न न सकिने परिमाणमा आई.एन.जी.ओ. चलाएका छन. तीनिहरुले उनीहरूको निहित स्वार्थ कै लागी काम गर्छन. यस्ता कामले सेनाको मनोबल खस्छ. परराष्ट्रले अझ सशक्त विरोध गर्नु पर्छ. बेलायती राजदूतलाई देशबाट निकाल्नु पर्छ.
Like or Dislike:00[जवाफ फर्काउनुहोस्]santosh khadka Reply: January 5th, 2013 at 5:49 amoe binaya yadav middle finger straight up for your comment…..
मोरङका ७२ विद्यालय अबैध !
इलाममा विपी पार्क
परीक्षा दिने शिक्षकलाई खानबस्न समस्या